SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay kal-fadhiga 7-aad ee baarlammaanka - Calanka.com
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay kal-fadhiga 7-aad ee baarlammaanka
Xarunta Golaha Shacabka Soomaaliya ee Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kalfadhiga todobaad ee baarlamaanka.
Fadhiga maanta oo si toos ah looga tabinayo qalabka warbaahinta maxalliga ah, ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxda ugu sarreysa dalka, sida gudoomiyaasha labada aqal ee Baarlamaanka, madaxweynaha jamhuuriyadda, ra’isulwasaaraha, duqa magaalada Muqdisho, mudanayaasha labada aqal iyo golaha wasiiradda.
Khudbadaha ayaa ahaa kuwo aad u kooban, kasoo qeybgalayaashana waxaa afka ugu wada duubnaa maaskarada looga hortago neefta si loo yareeyo faafista cudurka Covid-19.
Inta badan saxafiyiinta magaalada Muqdisho ayaa loo diiday in ay shirka tabiyaan. Tallaabadaan ayaa waxaa cambaareeyay ururka Isutagga Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ.
Xoghayaha guud ee JESOJ, Maxamed Ibrahim Nur Macallimu ayaa cambaareeyay go’aan uu sheegay in guddoonka baarlamaanka ay uga hor-joogsadeen wariyaasha madaxa bannaan qaarkood in ay kalfadhiga todbaad sooo tabiyaan.
Madaxdaweynaha Soomaaiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inti ay socotay khudbadiisa, la kulmay carqaladeyn uga imaneysay qaar ka mid ah xildhibaannada oo kala hortagay orrin iyo qeylo. Qaarkood ayaa yeerinnayay firinbi, halka kuwo kalana ay ku qeylinayeen inuu waqtiga ka dhamaaday.
Waa makri ugu horreysay ee uu madaxweynaha xubnaha baarlamaanka kala kulmo mucaarado toos ah, isaga oo jeedinaya khudbad si toos ah looga daawanayo aduunyada.
Wixi kusoo kordho shirkaan baarlamaanka uga socdo Muqdisho, kala soco halkaan.
GALKACYO: Qarax ismiidaamin ah oo lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug iyo Shabaab oo sheegtay
HARGEYSA: Booliska Somaliland oo irdaha u laabay xarunta taleefishinka Universal